“Haddii uu Alle idmo aniga iyo Neymar Real Madrid ayaan ka wada ciyaari doonaa”!! – Gool FM
“Haddii uu Alle idmo aniga iyo Neymar Real Madrid ayaan ka wada ciyaari doonaa”!!
Liibaan Fantastic April 27, 2018
(Madrid) 27 Abriil 2018 Xiddiga reer Brazil ee amaahda uga maqan kooxda Real Madrid ee Vinicius Junior ayaa rajaynaya in isaga iyo Neymar ay saaxiib ku noqdaan garoonka Bernabeu.
Real Madrid ayaa la wareegtay Vinicius Junior oo haatan ah 17-jir, waxaana lafilayaa inuu si rasmi ah ugu soo dhaqaaqo Spain bisha Janaayo ee 2019.
Vinicius Junior oo waraysi gaar ah siiyay The Guardian ayaa sheegay inuu rajaynayo in isaga iyo Neymar ay uwada ciyaaraan Real Mdarid, wuxuuna intaa ku daray in haddii taasi ay dhacdo inuu aad ugu farxi doono.
“Haddii uu Alle idmo aniga iyo Neymar waxaan ka wada ciyaaraynaa Real Madrid, riyadaydu waa inaan hal koox kawada ciyaarno, isagu waa laacibka aan ku daysado kubadda cagta, haddii aan helo fursad aan kula ciyaaro aad ayaan ugu farxi doonaa” ayuu yiri Vinicius Junior.
Hadalka Vinicius Junior ayaa imaanaya xili Neymar si wayn loo la xiriirinayo inuu ku biirayo Real Madrid.
Mourinho oo si adag uga horyimid wararka sheegaya in De Gea uu ka tagayo Man United